१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:०६ English
इरानका वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकको हत्या १३ मंसिर २०७७, शनिबार १४:४०
भारतमा कृषि कानूनको विरोधमा चर्कंदै प्रदर्शन १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ११:४७
नयाँदिल्ली । भारतमा कृषि कानूनको विरोधमा जारी प्रदर्शन थप चर्किंदै गएको छ । विभिन्न बाधा र झडपका बीच अलग अलग राज्यबाट किसानहरु दिल्लीतर्फ अघि बढेका हुन् । नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा किसानको प्रदर्शनले विशाल रुप लिएको हो । नयाँ कानुनमा कृषि क्षेत्रमा पूँजीपति या व्यसायिक घरानालाई..
खोप नआउँदासम्म भारतमा विद्यालय बन्द रहने ११ मंसिर २०७७, बिहीबार १५:३५
नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्ली प्रदेशमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप नआउँदासम्म विद्यालय बन्द नै रहने भएका छन् । खोप नआउँदासम्म बालबालिकाहरु विद्यालयमा सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले अहिले नै विद्यालयहरु खोल्न ठिक नहुने निश्कर्ष प्रदेश सरकारले निकालेको हो ।..
लिजेण्ड फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन ११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:२२
व्यूनर्सआयर्स । लिजेण्ड फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ । म्यारोडोनाको ६० वर्षको उमेरमा हिजो बुधबार निधन भएको हो । अर्जेन्टिनाको स्थानीय मिडियाले म्यारोडोनाको निधन भएको जनाएको छ । हृदयघातको कारण उनको घरमै निधन भएको बताइएको छ । दुई साता अघि मात्र म्याराडोना अस्पतालबाट..
कोरोनाविरूद्ध अक्सफोर्डको भ्याक्सिन ७० प्रतिशत प्रभावकारी ८ मंसिर २०७७, सोमबार १५:२४
लन्डन । कोरोनाभाइरसविरूद्ध बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले अस्ट्राजेन्कासँग मिलेर बनाइरहेको भ्याक्सिन ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ। बेलायती समाचार पत्र द गार्डियनका अनुसार अष्ट्राजेन्काले सोमबार तेस्रो चरणको परीक्षणबाट आफ्नो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत..
बजेटको विरोधमा ग्वाटेमालामा विपक्षीद्वारा संसदमा आगजनी ७ मंसिर २०७७, आईतवार १६:०१
लन्डन । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ग्वाटेमालामा प्रदर्शनकारीहरुले संसद भवनमा आगजनी गरेका छन् । संसदबाट पारित भएको बजेटको विरोधमा विपक्षी प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी र तोडफोड गरेका हुन् । आगजनीको समयमा संसद भवन खाली रहेको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले राष्ट्रपति अलेक्जेन्ड्रो..
भारतको उत्तरप्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा ६ बालबालिकासहित १४ जनाको मृत्यु ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:१२
लखनउ । भारतको उत्तरप्रदेशको प्रतापगढ जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा ६ बालबालिकासहित १४ जनाको मृत्यु भएको छ । विवाह समारोहमा सहभागी भएर फर्किएको बोलेरो जिप प्रयागराज–लखनउ राजमार्गमा रोकिराखेको एक ट्रकमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा चालकको समेत मृत्यु भएको छ ।..
अफगानिस्तानमा अस्ट्रेलियाली सैनिकको ज्यादति ! ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:१०
अस्ट्रेलियाली सैनिकले अफगानिस्तानमा अवैधानिक रुपमा ३९ नागरिकको हत्या गरेको प्रमाण भेटिएको एउटा सैन्य अनुसन्धानले जनाएको छ । अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स एडीएफले आफ्ना सैनिकहरूले अफगान युद्धका बेला गरेका दुव्र्यवहारहरूबारे चार वर्ष लगाएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य..
बेलायतमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्लने सवारीमा प्रतिबन्ध ! ३ मंसिर २०७७, बुधबार १५:३६
लण्डन । अबको दश वर्षपछि बेलायतमा पेट्रोल र डिजेलबाट कुद्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लाग्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका छन् । स्वच्छ वातावरण योजनाअनुसार बेलायतमा सन् २०३० पछि पेट्रोल र डिजेलबाट कुद्ने सवारीहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने भएको हो। प्रधानमन्त्री जोन्सनका अनुसार..
कोरोना भाइरसबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका ६५ कर्मचारी संक्रमित २ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:३३
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का ६५ जना कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । संगठनका अधिकारीहरुले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएदेखि अहिलेसम्म संगठनका ६५ जना संक्रमित भएका हुन् । उनीहरु सवै जना संगठनको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभामा..
रोमानियाको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा १० जनाको मृत्यु ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १०:१८
पेरिस । रोमानियाको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तिमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीका कारण अरु सात जना गम्भीर घाइते भएका छन् । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचार हुँदै आएको अस्पतालमा आगलागी भएको हो । बिरामीको उद्धार गर्न खोजेका एक डाक्टर जलेर गम्भीर घाइते भएका छन् ।..
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्‍व खाद्य कार्यक्रमलाई २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १७:२१
काठमाडौं । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) लाई दिइने भएको छ । शुक्रबार ओस्लोमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच स्विडिस एकेडेमीले सन् २०२० का लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार डब्लूएफपीलाई दिने घोषणा गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई..